"I-Spectacular Contemporary 2 Bedroom Chalet"
I-No83 iyiChalet entsha sha, yesimanje nesimanje, ehlome ngokugcwele futhi etholakala enhliziyweni ye-Oulton Broad; ilungele iholide lomndeni!
I-Broadlands Park & Marina inikezela ngendawo enokuthula e-Oulton Broad enhle. I-No83 iqhele ngamamitha nje ukusuka ezikhungweni zokungcebeleka zaseMarina kanye nendawo yokuphuzela utshwala nezindawo zokudlela, futhi iwuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka e-Nicholas Everitt Park; indawo enhle ene-Everitt Park Café, inkundla yokudlala yezingane, nendawo evulekile yokuhamba ngezinja.
I-No83 iyiyunithi yenja enobungani. Awekho Amakati!
Idolobhana lase-Oulton Broad linikeza izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela, amathofi nezitolo ezizimele. I-Wherry iyihhotela lendabuko elimangalisayo, indawo yokucima ukoma nendawo yokudlela etholakala ngaphesheya komfula! Isitolo esikhulu esiseduzane se-ASDA siqhele ngemizuzu emihlanu nje uma uhamba ngemoto.
I-Chalet iwuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka edolobheni elingasogwini lolwandle iLowestoft, kanye nokuhamba ngemizuzu engamashumi amabili ukusuka endaweni enhle yaseSouthwold kanye ne-Southwold pier edumile. Indawo ejwayelekile yolwandle yaseBrithani eGreat Yarmouth iyimizuzu engamashumi amabili nanhlanu ngemoto ukusuka eChalet kulabo abafuna ukuhlola indawo ezungezile.